‘तिम्रो र्‍यालीमा आएकाहरुले मेरा बहिनीहरुका लागि न्याय मागिदिए अर्की बहिनी बलात्कृत हुन्न थिइन् कि?’ – PrawasKhabar
‘तिम्रो र्‍यालीमा आएकाहरुले मेरा बहिनीहरुका लागि न्याय मागिदिए अर्की बहिनी बलात्कृत हुन्न थिइन् कि?’
२०७७ माघ २८ गते १४:२५
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशमा बलात्कारका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । अझ बालिका अपहरण, बलातकारपछि हत्या गरिएका समाचार दिनदिनै आउन थालेका छन् ।
गएको बुधवार मात्रै बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले अहिले सामाजिक संजाल तातेको छ । १२ कक्षामा अध्ययनरत उनको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको देखाएको छ ।
यो घटनाले महिलाहरुलाई अझै त्रसित र चिन्तित बनाएको छ । देशमा बढेको बलात्कारका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक संजालमा विभिन्न व्यक्तिहरुले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै अभिनेत्री नीता ढुंगानाले नारीलाई अपमान नभइ सम्मान गर्न आग्रह गर्दै सामाजिक संजाल फेसबुकमा एउटा पोष्ट लेखेकी थिइन् ।
त्यस्तै अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले पनि यस विषयलाई लिएर समाजिक संजाल फेसबुकमा एक पोष्ट लेखेकी छिन् । उनले नारीलाई भगवान मानेर पूज्ने देशमा निर्मला र सम्झनाजस्तै भागीरथीले पनि न्याय पाउँदिनन् त ? भनेर प्रश्न गरेकी छिन् । यती मात्रै नभएर उनले न्याय दिन नसकेको भन्दै न्यायपालिका र राज्यव्यवस्थामाथि नै प्रश्न गरेकी छिन् ।
उनले लेखेकी छिन्, ‘नारीलाई भगवान मानेर पूज्ने देशमा आज नारी स्वयं सुरक्षित छैनन् । निर्मला र सम्झनाजस्तै भागीरथीले पनि न्याय पाउँदिनन् त ? के यति असक्षम छ हाम्रो न्यायपालिका ? के यति कम्जोर छ हाम्रो राज्य व्यवस्था, एउटा अपराधिको पहिचन गरि, सजाय दिन नसक्ने ? के गरीबका लागि न्याय त्यति महँगो भइसक्यो ?’
उनको कलम यत्तिमै रोकिँदैन उनी थप्छिन्, ‘तिम्रो र्‍यालीमा आएका जति मानिसले मेरा बहिनीहरुको लागि न्याय मागिदिए फेरी अर्की बहिनी बलात्कृत हुन्न थिइन् कि ? तिम्रो आन्दोलनको नारा यदी बलात्कार र बलात्कारीको विरूद्धमा लाग्ने गरेको भए, सायद मेरी बहिनीको बलात्कारीले सजाय पाउँथ्यो कि ? हामी केका लागि लड्दै छौँ ? हाम्रो माग के हुनपर्ने हो ? नारा के हुनपर्ने हो ? आफै विचार गरौँ ।’
उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘अपराधीको मनोबल झन बलियो बन्दै छ । पीडित अझै पीँडामै छन् । जनताको सरकार र संविधानबाट भरोसा उठ्ने बेला भइसक्यो र देश झन झन अस्थिरतातर्फ जाँदैछ । कुर्सीको लडाइँ छोड, सत्यको लागि लड, जनाताको पक्षमा लड, जीत तिम्रै हुनेछ । न्याय दिन अझ विलम्ब नहोस ।’
सुरक्षा पन्त ‘कान्स’को रेड कार्पेटमा वाक गर्ने पहिलो नेपाली कलाकार
नायक पल शाहविरुद्ध बलात्कारसम्बन्धी अर्को उजुरी
नायक पल शाह पक्राउ
डिस्को संगीतका प्रख्यात बप्पी लाहिरीको निधन